Google wuxuu bilaabayaa barnaamij si uu ula socdo shirkiisa loogu talagalay horumarinta ee iOS | Wararka IPhone
Google wuxuu bilaabayaa barnaamij si uu ula socdo shirkiisa loogu talagalay horumarinta ee iOS
Maalmo yar gudahood Shirka Hormarinta ee Google, sida Apple, ay qabato sannad kasta iyo meesha wuxuu ku dhawaaqayaa warka ku imaan doona nooca ugu dambeeya ee Android N, oo ay weheliyaan mashaariic mustaqbalka ah oo aad hadda ku hawlan tahay. Shirarkani waxay bilaaban doonaan 18-ka Maajo waxayna dhamaan doonaan 20-aad Maalmo ka hor shirkadu waxay bilowday codsi ay ku raaci karto dhamaan shirarka ka socda aaladaha Android. Dhammaan kuwa adeegsada iPhone-ka ee bilaabay kaftanka ku saabsan codsigan iyo helitaan la’aantiisa App Store, Google ayaa hadda soo saartay dalabka Google I / O 2016 ee iOS si dhammaan adeegsadayaasha daneynaya ay ugala socdaan iphone-kooda.
Waxa ugu horreeya ee nagu soo dhaca ee ku saabsan codsigan ayaa ah in lagu heli karo oo keliya Ingiriisiga, waa wax aan la yaab nagu noqonaynin markaan tixgelinno koox kooban oo adeegsadayaal ah oo codsigan loogu talagalay, horumariyayaal, oo afkooda ugu weyn marka barnaamijku yahay Ingiriisiga. Thanks to codsigan waxaan awoodi doonaa inaan ku sameyno dabagal dhameystiran wax kasta oo ka dhaca shirarka:
La soco ajandaha shirka si aad u hesho dhammaan faahfaahinta ku saabsan mowduucyada looga hadlayo iyo dadka hadlaya.
Suurtagalnimada ku darista dhacdooyinka kalandarka.
Hesho xusuusinta dhacdooyinka aan liiska ku darnay.
Intaa waxaa dheer waxaan sidoo kale si toos ah u arki karnaa dhammaan qodobbada muhiimka ah iyo fadhiyada la qabto.
Liiskayaga ayaan kula qabsan karnaa aalado kale iyo kalandarka rasmiga ah ee Google.
Waxaan sidoo kale heli karnaa khariidad nagu hagta shirarka kala duwan.
Codsiga waxaa loogu talagalay dhammaan adeegsadayaasha xaqiijiyey imaatinka shirarka, iyo kan lala yeelanayo Ma awoodi doonaan inay ku dhex lumiyaan tas-hiilaadka oo ay ka qayb galaan dhammaan dhacdooyinka. Codsigan wuxuu si toos ah noo siinayaa isla xulashooyinka sida WWDC, oo ah barnaamij ay Apple noo oggolaaneyso inaan si buuxda ula soconno shirarka Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Google wuxuu bilaabayaa barnaamij si uu ula socdo shirkiisa loogu talagalay horumarinta ee iOS
Sida loo isticmaalo Apple Pay ee Spain (iyo waddan kasta)
Periscope waxaa lagu cusbooneysiiyay taageerada drones-ka iyo raadinta qiiqa